Amaqhinga abulala ukuThengiswa kweMixholo yakho #CONEX | Martech Zone
Izolo ndixelele ukuba ndifunde kangakanani malunga nokwakha amacebo e-ABM e-CONEX, inkomfa eToronto kunye neUberflip. Namhlanje, bakhuphe zonke iindawo zokumisa ngokuzisa zonke izinto ezibalaseleyo zokuthengisa ezifanele ukuba zibonelelwe lushishino- uJay Baer, ​​uAnn Handley, uMarcus Sheridan, uTamsen Webster, kunye noScott Stratten ukubala nje abambalwa. Nangona kunjalo, i-vibe yayingengomxholo wakho oqhelekileyo-iitos kunye neengcebiso.
Luluvo lwam nje, kodwa ingxoxo yanamhlanje ibininzi malunga nokunyaniseka malunga nendlela ophuhlisa ngayo umxholo wakho - ukusuka kwinkqubo, ukuya ekuhleni, indlela ohlalutya ngayo abaphulaphuli bakho, ukuya kwimilinganiselo yeshishini lakho.
Ingxoxo yaqala ngo Umsunguli we-Uberflip uRandy Frisch Ukwabelana ngamanani othusayo kunye nethemba malunga nomxholo. Usebenzise isifaniso esihle (esigqityiweyo nevidiyo) sonyana wakhe ezama ukudlala ingoma kaJustin Bieber ngefowuni ephathekayo, uSonos, kunye neKhaya likaGoogle. Inye kuphela ebonelele ngokuzaliseka kwangoko -Khaya likaGoogle. Umzekeliso: Unyana kaRandy wayefuna umxholo okhoyo kuzo zonke iinkqubo, kodwa inye kuphela eyenza kwalula ukuyifumana nokumamela.
Eli lihlabathi esiphila kulo kwaye inqaku laqhutywa ekhaya imini yonke.
UTamsen - waya kwiinkcukacha ezinkulu kuphuhliso lwe Umxholo weMatrix Matrix enika ulwazi olwakha ibhulorho phakathi kwethemba lakho kunye nawe. Icacise iinjongo, iingxaki, iinyaniso, utshintsho kunye nezenzo eziyimfuneko ukufikelela kwabo baphulaphuli.
Scott -Beka umboniso wokuzonwabisa kunye nokuhlekisa obonisa indlela yokuziphatha eyoyikekayo kwezentengiso, apho iinkampani zisebenzisa amacebo amabi (njengokubanjwa kweendaba kusilele) ukufumana inzuzo yexesha elifutshane ngelixa utshabalalisa igama labo. Njengoko uScott ebeka:
Imilinganiselo yokuziphatha kunye nokuthembeka azikho izixhobo ezinokuhlaziywa.
Marcus -Beka into engenasiphako, ekhawulezayo yomlilo osikhumbuze ukuba inyani kunye nokunyaniseka yile nto ayifunayo wonke umthengi xa efuna ulwazi kwiwebhusayithi yakho, kodwa kunqabile ukuba bafumane ulwazi olunzulu (njengamaxabiso). Ucacisile ukuba ungawuphendula njani ngokunyaniseka umbuzo, kwaye ubunzulu, ngelixa ungayibeki inkampani yakho emngciphekweni. Ngokuchasene noko, wabonisa indlela onokuma ngayo kwimizi-mveliso yakho ngokuphendula imibuzo onethemba lokuyifumana kwi-Intanethi.
Umnqweno oboniswe sisithethi sonke namhlanje uxele ibali elifanayo… abathengisi bomxholo babulala ishishini labo ngamava omxholo obuthathaka, obuthathaka ongashukumisi inaliti. Ngalo lonke elixesha abathengi kunye namashishini baphanda kwaye baqhuba iihambo zabo zabathengi mihla le. Xa iinkampani zisenza kakuhle, zixhobisa abathengi bazo ukuba bazilungele kwaye bavale intengiso ngaphandle kokunxibelelana. Kodwa xa iinkampani zisenza ngokungalunganga, uninzi lwezixhobo ezintle abazityala kumxholo zilahlekile.
Xa siphuhlisa umxholo wabathengi bethu, ndiyenza icace into yokuba ukuhanjiswa okwenyani kuphela sisishumi somsebenzi. Sisebenzisa abaphandi, ababalisi bamabali, abayili, ababhali bevidiyo, oopopayi, kunye nabuphi na ubutyebi obuyimfuneko ukuvelisa umxholo. Senza uphando kubalamli nakubaphulaphuli ukuba singayibeka phi siyikhuthaze. Sihlalutya ukhuphiswano, ishishini, abona bathathi zigqibo, kunye nayo yonke imiba yohambo olukhangeleka njani phambi kokuba kuvulwe isivakalisi sokuqala.
Ngumdlalo omde. Asidlaleli ukubetha, sidlalela imbaleki… ukuphumelela. Kwaye ukuphumelela, abathengisi kufuneka baqinisekise ukuba iinkampani zabo zithathwa njengezithembekileyo, ezithembekileyo, ezinegunya, kwaye zikulungele ukukhonza. Kwaye xa siyenza ngokuchanekileyo, siphumelela ngalo lonke ixesha.
Akukho ndlela ndinokuyiphelisa ngayo le post ngomhla we-CONEX ngaphandle kokukhankanywa Umxholo womxholo. Ngomninimzi ongakholelekiyo uJay Baer, ​​le seshoni yenye yezona zinto zihlekisayo, ezona zinto zininzi zoyilo endakha ndazibona kwinkomfa. IBravo yeCONEX yokuvelisa oku kungakholelekiyo amava.
tags: Ann Handleyukudibanainkomfa yomxholoyokuziphathanya nisekaIngqibeleloUJay BaerUMarcus Sheridaninkomfa yentengisoscott strattenUTamsen Websterumxholo womxholoiqinisouberflip
Ukukhuthaza ukuGuqulwa kwakho ngokudibanisa ezi 5 zokuBulala abaGuquli